Soo dejisan Guitar Pro 6.1.8.11683 – Vessoft
Soo dejisan Guitar Pro
Gitaar Pro – editor caan ah audio ee noocyada kala duwan ee qalabka muusikada. Pro kaban kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan darey muusikada, edit iyo sheet music ama kaban tablature record, dhegaystaan ​​jajabkii ka eeg, diinta raad audio in qaabab kale audio iwm kaban Pro waxaa ka fretboard kaban ah, guddi ee durbaanka alaabtii muusikada iyo furaha qalabka muusikada farsamada geedi socodka shaqada la alaabtii muusikada. Software wuxuu isticmaalaa technology gaarka ah si ay u Radidiyaha sanqadha badan oo ka mid ah alaabtii muusikada. Sidoo kale kaban Pro taageertaa tiro badan oo ka mid ah goobaha iyo saamaynta dhawaaq oo kala duwan.
Taageerada teebabka, wides iyo alaabtii xadhig
Fursada aad edit iyo abuuro sheet music
Ku darista ee raacidda qoraalka ah
Taageerada Meelo badan oo saamaynta codka
Sanqadha xaqiiqada ah alaabtii muusikada
Comments on Guitar Pro:
Guitar Pro Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... CuteDJ 4.3.3